Blogging အပိုင်း (၁) (OR) Gmail Account အသစ်ဖွင့်နည်း ~ သန့်သူရဦး ( နည်းပညာ )
မြန်မာ E BOOK များ
Blogging အပိုင်း (၁) (OR) Gmail Account အသစ်ဖွင့်နည်း
6:11 PM Blog And HTML, ရှင်းပြချက်များ, လက်တွေ့သင်ခန်းစာ5comments
အခု Blog တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ဖန်တီးကြရအောင်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Blog တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် Google Mail ( G-Mail ) တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ G-Mail ကိုအကောင့်အသစ်ဖွင့်ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိ Blog လုံခြုံရေးအတွက်ပါ။ Username မသိတဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမှ Hack ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိမိ Blog ရေးသားတဲ့အကောင့်ကိုဘယ်သူ့ကိုမှပေးမသိပါနဲ့၊ Blog ရေးတဲ့အကောင့်နဲ့ Chatting, Mail လုံးဝမသုံးပါနဲ့၊ ပြီးတော့ အကောင့်စဖွင့်ရက်၊ Blogger စသုံးရက်၊ တကယ်လို့ကိုယ်က Feed Burner ကိုလည်းဒီအကောင့်နဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း Feed Burner စသုံးရက်စတဲ့ Google ကပေးထားတဲ့ Product တွေသုံးတဲ့ရက်စွဲတွေကိုမှတ်ထားပါ။ ဒါမှကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင် (ဆိုလိုတာက Hack ခံလိုက်ရရင်) ပြန်ယူရအောင်ပါ။ အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Feed Burner ကမေးလ်နဲ့ဖတ်သူတွေဆီမေးလ်ဝင်ရင် သူ့ကိုပေးထားတဲ့အကောင့်နဲ့ပို့ပါတယ်။ ဥပမာ-ကျွန်တော်က Feed Burner ကို thantthuraoo@gmail.com နဲ့လုပ်ထားရင် မေးလ်ပို့တဲ့အခါ thantthuraoo@gmail.com နဲ့ပို့ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ရင် no-reply@blogger.com နဲ့ပဲပို့တော့တဲ့အတွက် Feed Burner အတွက်အကောင့်သီးသန့်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။ ကိုယ်က ဆော့ဖ်ဝဲတွေဝေမျှဦးမယ်၊ တခြား Hosting တွေကနေရှယ်ယာပေးဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒီ Hosting တွေမှာအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် မေးလ်တစ်ခုသီးသန့်သုံးပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hosting ဆိုဒ်တွေကိုစိတ်မချလို့ပါ။ အဲဒီတော့အခုအကောင့်တစ်ခုစဖွင့်လိုက်ရအောင်။ အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် www.mail.google.com ကိုသွားပါ။ ပြီးရင်အပေါ်ထောင့်နားက Create An Account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာကြည့်ပါ။
ဖော်ပြမယ့်အမည်ကတော့ ကိုယ်ပေးချင်သလိုပေးပါ။ရပါတယ်။ မြန်မာလိုလည်းရပါတယ်။
Username ကတော့ English လိုပဲရပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများသုံးပြီးသားနာမည်မဟုတ်ရပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မေးလ်တွေထပ်ပြီး မှားဝင်မှာစိုးလို့ပါ။ ကိုယ်ရတဲ့ Username ကိုလည်းစိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့် Username လိုမျိုးနောက်ထပ်မရှိပါဘူး။ ဥပမာ- မြန်မာပြည်က thantthuraoo@gmail.com နဲ့ အင်္ဂလန်က thantthuraoo@gmail.com တူနေတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက တူချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ Mail တစ်ခုတည်းမှာမရပါဘူး။ ဥပမာ- thantthuraoo@gmil.com နဲ့ thantthuraoo@yahoo.com ဆိုပြီးရပါတယ်။
Password နေရာမှာတော့ပေးချင်သလိုပေးပါ။ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများခန့်မှန်းလို့ရတာမျိုးတော့မပေးနဲ့ပေါ့။
Password ပြန်ရေးတဲ့နေရာမှာတော့ အပေါ်မှာကိုယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပြန်ရေးပေးပါ။
မွေးနေ့မှာတော့ ကိုယ့်မွေးနေ့မဟုတ်လည်းရပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့မွေးနေ့ကို 18 နှစ်ကျော်အောင်ပေးပေါ့။ ဒါမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တချို့ Google Product တွေက 18 နှစ်မကျော်ရင်အကောင့်မဖွင့်ရဆိုပြီးရှိလို့ပါ။ ဥပမာ- Google+ လိုပေါ့။
လိင်အမျိုးအစားနေရာမှာတော့ Male (or) Female တစ်ခုခုရွေးပေးပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးပေါ့။
ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့မြန်မာပြည်ကဖုန်းဆိုရင် ဘယ်ဖုန်းမှမရပါဘူး။ အဲ့တော့ ကိုယ်ကနိုင်ငံခြားကအသိရှိတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက နိုင်ငံခြားကသူများဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။ အဲဒီကိုယ်ရေးပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေတစ်ဆင့်အကောင့်ကို အချိန်မရွေးယူသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူကစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပေါ့။ မြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက်တော့အကြံအဖန်လုပ်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဖုန်းဆိုရင် 092038491၊ အဲ့တော့ ရှေ့က0ကိုဖြုတ်ပြီး 92038491 လို့ရေးရတယ်။ အဲဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ယူလို့တော့မရပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်က မြန်မာပြည်မှာ ရှိမှမရှိဘဲ။ သူလက်ခံအောင်သာ အကြံအဖန်လုပ်ရတာလေ။
နောက်ပြီးတော့ ရှိပြီးသားမေးလ်တစ်ခု။ အဲဒါကလည်းဖုန်းနံပါတ်လိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လိုတော့ အကြံအဖန်မရပါဘူး။ တကယ်ရှိတဲ့မေးလ်ပဲရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာမေးလ်တစ်ခုတောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ချရတဲ့သူငယ်ချင်းမေးလ်ကိုသာရေးပေးလိုက်ပေါ့။ အဲဒီမေးလ်ကနေတစ်ဆင့်အကောင့်ကိုပြန်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ သတိထားနော်။ ကျွန်တော့မေးလ် thantthuraoo@gmail.com ရေးပေးလိုက်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ ရေးပေးလိုက်ပါ။ ဘယ်သူ့အကောင့်မှမယူပါဘူး။ ယူဖို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာနော်။ပြီးသွားရင် အောက်မှာဆက်ကြည့်။
ဆက်ရေးရမှာကတော့ အပေါ်က Box လေးထဲမှာ သူပေးထားတဲ့အတိုင်းစာလုံးလေးတွေရေးပေး၈ုံပါပဲ။ လွယ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Location။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံရွေးပေးပေါ့။ မြန်မာဖြင့်မြန်မာပေါ့။
ပြီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Agree to the google ဘာသာသာရကာပေါ့နော်။ အဲ့ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးခဲ့ပါ။ ပြောရရင်တော့ Google ရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပါ့မလားပေါ့နော်။ ဘယ်သူမှကိုယ့်လိုက်ကြည့်နေတာမှမဟုတ်တာ။ မတူချင်လည်း တူပေးလိုက်ပေါ့။ ပြီးမှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်။
ပြီးသွားရင်တော့ Next Step ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲဒါဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်လုပ်ရပါမယ်။အောက်မှာကြည့်ပါ။
ဒီပုံလေးကတော့ ကိုယ့် Profile မှာပုံမထည့်ချင်တော့တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ပုံထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ Add Profile Photo ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
ပုံရွေးဖို့နှိပ်၊ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ Box မှာကြိုက်တဲ့ပုံရွေး။
ပြီးတော့ Open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်။အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံကို Upload စတင်လိမ့်မယ်။
ပုံအရွယ်အစားချိန်ရမယ့်နေရာမှာ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပုံထွက်လာပါမယ်။ ဘေးကလေးထောင့်အကွက်လေးတွေကိုနှပ်ပြီး ပုံအရွယ်အစားချိန်ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ Set as Profile Photo ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒီမှာ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မကြိုက်သေးရင် Edit Profile Photo ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ပြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Next Step ပေါ့။ နောက်တစ်ဆင့်သွားရအောင်။ အောက်မှာကြည့်ပါ။
ပြီးရင်တော့ မိမိအကောင့်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် Continue To Gmail ကိုနှိပ်ခဲ့ပါ။ဒါဆိုရင် Gmail ကိုရောက်သွားပါမယ်။ အောက်မှာကြည့်ပါ။
ကဲ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ Gmail Account အသစ်ဖွင့်နည်းသိသွားပြီဖြစ်သလို အကောင့်အသစ်တစ်ခုလည်းရပြီပေါ့ဗျာ။
ဒီပို့စ်မှာတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ပို့စ်တစ်ခုကို နည်းနည်းချင်းသင်ပေးသွားပါမယ်။ ပို့စ်တစ်ခုတည်းမှာအကုန်လုံး စုပြုံထည့်လိုက်ရင် ဖတ်ရတာလည်းပျင်းသွားမှာဖြစ်သလို စာကလည်းအရမ်းရှည်သွားမယ်။ စာရှည်တာကတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဘယ်လောက်ရှည်ရှည် ရှည်ပါစေ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပို့စ်လေးက Gmail အကောင့်အသစ်ဖွင့်နည်းလို့တောင်ခေါင်းစဉ်ပေးသင့်တာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Gmail ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Blogging အတွက်ဆိုတော့ Blogging အပိုင်းတစ်နှင့် Gmail Account အသစ်ဖွင့်နည်းလို့ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာပဲ ခဏနားလိုက်ရအောင်နော်။
မှတ်ချက်။ အပေါ်ရှိပုံများတွင်ပေးထားသော Username များမှာ အမှန်တကယ်မရှိပါ။ သဘောမျှသာရေးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်အကောင့်များပါသည့်ပုံများတွင် Username များကိုဖျက်ထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီး ဖော်ပြမယ့် Blogging အပိုင်းများတွင်လည်း အကောင့်များကိုဖျက်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Anonymous February 7, 2012 at 5:04 PM
love forever March 1, 2012 at 1:11 AM
တတ်တော့ မတတ်သေးဘူး လုပ်တတ်ချင်တယ် ကျေးဇူးပါဗျာ နောက်လဲေ၇းပေးပါ
Lae Waiyee May 28, 2013 at 1:58 AM
TheinaingSoe October 18, 2014 at 8:37 AM
yin min oo August 26, 2015 at 2:47 AM
သင့်မှတ်ချက်တစ်ကြောင်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်သည်။
သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာသာထားခဲ့ပါ။ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း မေးလ်ဖြင့်ပြန်ပို့ပေးပါမည်။
ဤ Website အတွင်းရှိ Zip Files များအားလုံးကို Win.rar ဖြင့် ချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်စက်တွင် Win.rar မရှိပါက Download Section တွင်သွားရောက်ဒါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါသည်။
(၁) email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Subscribe ကို နှိပ်ပါ ။
(၂) ပေးထားသည့် code နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Complete subscription Request ကို နှိပ်ပါ.
(၃) Feedburner မှ သင့်ထံမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
(၄) အဆိုပါမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင် Activate Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
(၅) Email Subscription Confirmed! လို့ အတည်ပြုပြီးတဲ့ စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၆) ဒါဆိုရင် ဒီ website တွင်အသစ်ရေးသမျှကို လာကြည့်စရာမလိုပဲ မေးလ်ထဲကိုချက်ချင်းပို့ပေးပါမည်။
Kaspersky Keys For 23-FEB-2012
Ziddu, I file,Media Fire
Kasper Sky Key ထည့်နည်းမသိလျှင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
How To Forex online casino Casinos Online men shaving Casinos
Casinos online, casinos, DATING SITES, ONLINE CASINO, casino
အားလုံးကို တစ်ခုကြေငြာချက်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အခုဆိုဒ်ကိုပြန်ဖွင့်ပါတော့မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ...
Website ရေးနည်း မြန်မာလို
ဒီကောင်လေးကတော့ HTML Code နဲ့ Website Design ရေးနည်းလေးပါ။ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပုံလေးက ကျေနပ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဖိုင်သုံးဖိုင်ပါပါတယ်။ လိုချင်ရ...
ပရော်ဆီ ကျော်ခွနည်း ။
ကျော်တဲ့ PROXY အသုံးပြုပုံလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ MOZILLA FIREFOX ကိုဖွင့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာ TOOLS ဆိုတာရှိပါတယ် ၀င်လိုက်ပါ။ OPTION ကိုနှိပ်ပ...
အခု Blog တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ဖန်တီးကြရအောင်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Blog တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် Google Mail ( G-Mail ) တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ G...
မေးထားတဲ့ Kaspersky Key ထည့်နည်း
thurazawkoko@gmail.com :: တခုလောက်မေးပါရစေ kespersky ကို activation လုပ်တာမှာ code no ကိုရိုက်သော်လည်း မရတာ ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလို.ပါလဲ ဆိုတာေ...
Adobe Group (1)
Blog And HTML (6)
G - Mail And G - Talk (3)
Hacker And Hacking (9)
JAVA Stript (1)
Photo Shop (56)
Website လမ်းညွှန်မှုများ (1)
ကွန်ပြူတာ အမေးအဖြေများ ။ (11)
မြန်မာ EBook များ (63)
17-Feb-2012 မှာကျွန်တော့်အသက် 17 နှစ်ပြည့်ပါပြီ။
Blogging အပိုင်း (၃)
Blogging အပိုင်း (၂)
Blogging အပိုင်း (၁) (OR) Gmail Account အသစ်ဖွင့်န...
Copyright © 2011 သန့်သူရဦး ( နည်းပညာ ) | Template Design By သန့်သူရဦး.
နည်းပညာနှင့်ပတ်သတ်သည့်မေးခွန်းများမေးလိုပါက thantthuraoo@mmcfamily.org သို့ Mail ပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အဖြေများကို Website တွင်ဖော်ပြပေးပါမည်။